Sudan-ta Koonfureed - BBC News Somali
Waxa uu ka mid ahaa ciidankii Carbeed ee ka barbar dagaalamayay Masar sannadkii 1973dii.
Golaha Militeriga ee Sudan maammulo ayaa doonaya inuu xiriir diblumaasi la yeesho waddamada waaweyn
Cumar Al Bashiir oo dacwad lagu soo oogay
Ilaa hadda lama hayo wax war ah oo ku saabsan xaaladda Al Bashiir
Madaxda hor boodaya dibadbaxyada Sudan oo sheegay inay sii tubnaanayaan xarumaha milatriga
Dadka soo abaabulay dibadbaxyada dalka Sudan ayaa sheegay in hor tubnaanta afaafka hore ee xarumaha milatariga Khartuum ay sii socon doonto ilaa iyo inta ay socoto dadaalada lagula xaajoonayo milatriga.
Hoggaamiyeyaasha mudaharaadyada ka socda magaalada Khartoum ayaa sheegay iney ku qnacsaneen isbeddel ku sheegga ay ciidamada sameeyeen oo ay si degdeg ah u doonayaan dowlad rayid ah in la dhiso.
Cumar Al Bashiir oo ka cabsi qabo in sidii madaxdii carbeed xilka looga xayuubiyo
Waa booqashadii labaad uu Al Bashiir ku tego dalal shisheeye tan iyo markii dibadbaxyada ay dalkiisa ka bilaawdeen bishii Disembar ee sannadkii lasoo dhaafay.
Dhaqaatiir ka qeyb qaadanayay dibadbaxyada ka dhanka ah xukuumadda Sudan oo la xirxiray
Saacado ayaa boolisku waxa ay dadkan ku kala eryayeeen gaaska dadka ka ilmeysiiya iyada oo saraakiisha dhar cada ah ay ceyrsanayeen kumanan dibadbaxayaal ah kuwaasi oo socod ku marayay wadooyinka Bahri ee ku dhaw waqooyiga caasimada Khatruum.
14 Jannaayo 2019
Qaramada Midoobay oo baaq u dirtay dowladda Koonfurta Sudan
Qaramada Midoobay ayaa cambaareysay kufsiyo la sheegay in loo gaystay haween badan dalkaasi Koonfurta Sudan.
3 Disembar 2018
South Sudan oo dib u bilowday soo saarista shiidaalka ceyriinka
Dowladda Sudanta Koofureed ayaa dib u bilowday soo saarista shiidaalka ceyriinka ee laga soo saari jiray deegaanka Toma ee gobolka Unity. Collaadihii mudada shanta sano ka tagnaa gobolkaasi ayaa hakiyay shiidaalkii laga soo saari jiray dalkaasi.
26 Agoosto 2018
Waddanka South Sudan ayaa noqday sanadki seddexaad oo xiriir ah waddan ay shaqaalaha gargaarka halista ugu badan kala kulmaan.
Baarlamaanka South Sudan oo meel mariyay isbedel dhanka sharciga ah
Sharci dejiyeyaasha Koonfurta Sudan ayaa meel mariyay isbedel lagu sameeynayo sharciga dalkaasi kaas oo madaxweyne Salva Kiir u ogolaanayo in uu wadanka sii xukumo ilaa sandka 2021-ka
Dowladda Koonfurta Suudaan iyo kooxaha fallagaada oo heshiis wada gaaray
Dowladda Koonfurta Suudaan iyo fallaagada ayaa kala saxiixday heshiis dhanka amniga ah oo lagu doonaya in xabad joojin waarta laga dhaqan geliyo dalkaasi.
Mucaaradka iyo dowladda Koonfurta Sudan oo heshiis wada gaaray
Madaxwaynaha Koonfurta Sudan Salva Kiir, iyo hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar,ayaa kala saxiixday heshiis si loo soo afjaro dagaalka sokeeyay ee dalkaasi ka socday muddo 5 sano ah.
Maxaa keenay iney maxkamadda Suudaan ka noqoto xukunka dilka ay horay u ridday?
Maxaa keenay iney maxkamadda Suudaan ka noqoto xukunka dil ah oo horay ugu ridday gabar ninkkeeda dishay.
Uganda: Qaxooti reer South Sudan ah oo kubad la daawanayey qudha iskaga jaray
Booliska dalka Uganda ayaa sheegaya in 17 qof ay xabsiga dhigeen kaddib markii afar qof oo u dhashay dalka South Sudan oo qaxooti ah lagu dilay dagaal ka dhacay goob lagu daawanayay ciyaarta kubadda cagta ee adduunka.
23 Juunyo 2018
Dowladda Suudaan-ta Koonfureed oo loo qabtay bil iney dagaallada ku soo afjarto
Dowladda Suudaan-ta Koonfureed oo loo qabtay bil iney dagaallada ku soo afjarto haddii kale ay wajaheyso cunaqabateyn.
Ciidamo dalka Sudan u dhashay oo Yemen lagu laayay
Saraakiisha Militariga dalka Yemen ayaa sheegay in fallaagda Xuutiyiinta ay ku go'doomiyeen ciidamada Sudan gobolka dhaca waqooyiga dalkaas ee Hajjah.
8 Abriil 2018
IGAD oo ku baaqday in xayiraadda laga qaado hogaamiya fallaagada South Sudan
Urur goboleedka IGAD ayaa ku baaqay in hogaamiyaha fallaagada South Sudan, Riek Machar, sida ugu dhakhsaha badan looga sii daayo xabsi guriga uu ku jiro.
27 Maarso 2018
Daawo: Waxaan goob joog u ahaa dilkii Cabdirashiid Cali Sharma'arke
Waa kuma Maxamed Cali - ninka laf dhuun gashay ku noqday Madaxweynaha Masar?
Maxaad ka taqaanaa maleeshiyada Cali Qaran ee Shabaabka la dagaallanta?